Global World - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဇြန္လ 12, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 ဒေးဗစ်ဂျက်ဆင်၊ MBA	မှတ်ချက် Leave
တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးသည်ယနေ့ခေတ်စီးပွားရေးလောကတွင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ရုံးရှိကြိုးဖုန်းများကိုမှီခိုခြင်းမှသည်ယခုအခါမိုဘိုင်းဖုန်းများအထိဆက်သွယ်ရေးကိုလွယ်ကူစေသည်။ တယ်လီကွန်းကုမ္ပဏီအမြောက်အများရှိသော်လည်းမည်သည့်ကုမ္ပဏီကမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့်မကိုက်ညီပါ။ အချို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာသောဒေတာအစီအစဉ်များကိုနှစ်သက်ကြသော်လည်းအချို့ကမူလုံခြုံသည့်ကွန်ယက်များကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ် roaming အတွက်အဆင်ပြေစေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဖုန်းအစီအစဉ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ သင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်အရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်သင်သတိထားရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်စင်္ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေပြီး၎င်းကိုစာရင်းသွင်းလိုပါက အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖုန်းဖုန်းအစီအစဉ်များဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းမှာအကောင်းဆုံးအချို့ကိုစုစည်းထားသောကြောင့်။ ကြည့်ပါ ဦး
ဇြန္လ 12, 2021 ဇြန္လ 11, 2021 Stella Ryne	မှတ်ချက် Leave
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်ကွဲပြားသောသော့ခလောက်အမျိုးအစားများသည်လူတိုင်းအတွက်ခက်ခဲခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်ဟာစွန့်စားခန်းလူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့သင်ဟာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ခံစားမိလိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ သို့သော်၊ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းနိမ့်ကျသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည် ခရီးသွားစတင်ပါ နောက်တဖန် သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားသင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ပါကစိတ်မပူပါနဲ့။ သင်၏နောက်ခရီးကိုသင်၏ဘဝ၏စွန့်စားမှုဖြစ်လိုပါကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအတွေးအမြင်အချို့ကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဇြန္လ 10, 2021 ဇြန္လ 10, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ရွေးကောက်ပွဲ ၄ ခုအပြီးတွင်နောက်ဆုံးတွင်အစ္စရေးသည်လုပ်ပိုင်ခွင့် ၆၁ ခုနှင့်ပေါင်းစည်းထားသည့်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ စတုတ္ထရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်နေတန်ယာနှင့်လီကွတ်တို့မှာရွေးကောက်ပွဲတွင်အများဆုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်များရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်နေတန်ယာဟုသည် ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်သူနှင့်အတူအစိုးရတစ်ခုဖွဲ့ရန်အခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။ နေတန်ယာဟုသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 7, 2021 ဇြန္လ 6, 2021 ဗစ်ကီကားမောင်းကျောင်းမဲလ်ဘုန်းမြို့	မှတ်ချက် Leave
အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံရှိသောယာဉ်မောင်းတစ် ဦး ကိုမေးလျှင်သူ / သူမသည်အလိုအလျောက်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှလူအများခေါ်သည့်အတိုင်းလက်စွဲကား (သို့) အဆိုင်းကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတစ်စီးကိုကားမောင်းတာကပိုပြီးပျော်စရာကောင်းလို့လေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကအင်ဂျင်ကဘယ်လောက်လိုချင်တယ်ဆိုတာကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားလို့ပဲ။ သင်၏အင်ဂျင်မှအသီးဖျော်ရည်များရရန်သင်ကားကိုပိုမိုမြင့်မားသော RPM များ၌ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
Queen Baltistani - Fearless Pro Freedom Fighter နဲ့ Insight Woman တို့သေကြပြီ
ဇြန္လ 6, 2021 ဇြန္လ 5, 2021 ရှိတ် Atif Maqbool	မှတ်ချက် Leave
Baltistan ၏နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းနှင့်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဘုရင်မ Baltistani ရှည်လျားသောဖျားနာမှုအပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ ရက်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကွယ်လွန်သွားသည်။ သူမသည် ၁၉၄၆ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Gilgit-Baltistan ၏အခွင့်အရေးအတွက်တစ်သက်လုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူသည်ကနဒ်ကောလိပ်အပါအ ၀ င်လာဟိုးတွင်စတင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကရာချိတွင်အခြေချခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်သူသည်နယ်စပ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေ (FCR) နှင့်လူမည်းဥပဒေနှင့်အခြေခံဥပဒေနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောအငြင်းပွားနေသော Gilgit-Baltistan ဒေသတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင်သူမသည်ရာချိတွင်နေထိုင်စဉ် Gilgit-Baltistan မှပညာရှင်များလည်းအဓိကပါ ၀ င်မှုဖြင့်စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့သည်။
ဇြန္လ 4, 2021 ဇြန္လ 4, 2021 ဆိုင်အက်ဥပဒေလိုင်စင်အိန္ဒိယ	မှတ်ချက် Leave
ယနေ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးများသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိအလုပ်နယ်ပယ်အားလုံးတွင်သူတို့၏စွမ်းရည်၊ ယနေ့အိန္ဒိယအိန္ဒိယအမျိုးသမီးများသည်ဘဝကဏ္ all အားလုံးတွင်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိပြီးသူတို့၏မိသားစု၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်တိုင်းပြည်နှင့်ကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်များစွာအထောက်အကူပြုလျက်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အိန္ဒိယရဲ့ကော်ပိုရိတ်လောကမှာအိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမှတ်သားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်ကော်ပိုရေးရှင်းကမ္ဘာသို့လမ်းညွှန်အသစ်ပေးပြီးအောင်မြင်သောအိန္ဒိယအမျိုးသမီးများအကြောင်းအချို့သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြထားပြီး၊ အခြားသောအမျိုးသမီးများအားလုံးသည်ထိုအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးများမှလှုံ့ဆော်မှုများယူနိုင်သည်။
Saniul Alom Sun - ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာနှင့်ဂီတသမားတစ် ဦး ၏ပုံပြင်
ဇြန္လ 3, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 SANIUL ALOM SUN	မှတ်ချက် Leave
Saniul Alom Sun က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှအငယ်ဆုံးစာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာနှင့်ဂီတပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် Pabna Polytechnic Institute ရှိအီလက်ထရောနစ်ဌာန၌ဒီပလိုမာအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုလေ့လာနေသည်။
Hi သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဂီတအနုပညာရှင်စာရေးဆရာနှင့်စာရေးသူဖြစ်ပြီး (Saniul Alom Sun) Bing Page နှင့် Apple စာအုပ်ပေါ်တွင်အများဆုံးစာအုပ်အဖြစ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ သူ့မှာ Apple စာအုပ်၊ Amazon အကြောင်းစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ Google play book နှင့် music platform တွင်သီချင်းများစွာရှိသည်။ သူ၏တရားဝင် Saniul Alom Sun အမည်ရှိဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ။ သူသည်သူ၏ဂီတလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည်တေးဂီတနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်အမျိုးအစားများစွာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ဇြန္လ 3, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 ဆိုင်အက်ဥပဒေလိုင်စင်အိန္ဒိယ	မှတ်ချက် Leave
သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်လိုသည်၊ လုပ်ရန်စဉ်းစားနေသည်သို့မဟုတ်သင်က startup တစ်ခုစတင်ရန်စဉ်းစားနေသည်ဆိုပါကဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ အဆုံးတိုင်အောင်အိန္ဒိယတွင်မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုစတင်မည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပြီးဖြစ်သည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင် startup စတင်ရန်
သင်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစလုပ်မည်ကိုစဉ်းစားသောအခါ၊ များစွာသောမေးခွန်းများသည်သင့်စိတ်ထဲပေါ်လာပြီးမေးခွန်းအချို့ကိုဖြေကြားပေးသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောသံသယများစွာရှိသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ယနေ့ဤ post တွင်ထိုသံသယများအားလုံးကိုရှင်းလင်းသွားလိမ့်မည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ startup စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအလွန်လွယ်ကူစွာစတင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Akash Goswami ကို Mr Noakhali ကဘယ်သူလဲ။
ဇြန္လ 3, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 Karim Uddin	မှတ်ချက် Leave
Mr Noakhali ဟုနာမည်ကြီးသော Akash Goswami သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂီတအနုပညာရှင်၊ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်၊ သရုပ်ဆောင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်၊ Gamer နှင့် Instagram Personality ဖြစ်သည်။ Mr Noakhali ကိုစက်တင်ဘာ ၄ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Chattogram ဌာနခွဲရှိ Noakhali တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Mr Noakhali ကို Spotify & Youtube ကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးများကအတည်ပြုအနုပညာရှင်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ Mr Noakhali ၏သီချင်းများကိုယခုစင်မြင့်ပေါ်တွင်ရနိုင်သည်။ သီချင်းချစ်သူများသည်လိုလျှင်သီချင်းများကိုနားထောင်နိုင်သည်။ လူကြိုက်များသောဂီတဒါရိုက်တာများ၊ အနုပညာရှင်များသည်သူ့ကို Twitter, Facebook နှင့် Instagram.med တို့တွင်အဆင့်အတန်းများဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်
Pune ရှိဆိုင်ခန်းလိုင်စင်၊ မွန်ဘိုင်းရှိ Gumasta လိုင်စင်
ဇြန္လ 2, 2021 ဇြန္လ 2, 2021 ဆိုင်အက်ဥပဒေလိုင်စင်အိန္ဒိယ	မှတ်ချက် Leave
ဆိုင်အက်ဥပဒေလိုင်စင် အိန္ဒိယရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်သူသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်သူတိုင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အမြင့်ဆုံးအချိန်သည်ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာစစ်ဆေးပြီးနောက်အကြီးအကဲစစ်ဆေးသူမှလျှောက်လွှာကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးနောက်အောင်မြင်သောအတည်ပြုချက်အရလျှောက်ထားသူသည်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသည်။
New World Order - အစ္စရေးနှင့်ကမ္ဘာ
ဇြန္လ 2, 2021 ဇြန္လ 2, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးကမ္ဘာသစ်ကိုစတင်သော်လည်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးနှင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီးသည်အထိအဖြစ်မှန်သို့မရောက်ရှိနိုင်သေးပါ။ ကမ္ဘာသစ်စနစ်သည်လောကနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်သည်ဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာနှင့်အော့တိုမန်အင်ပါယာအတွင်းသို့တိုးချဲ့သည့်အစ္စရေးကျမ်းစာဆိုင်ရာNသရေလလူမျိုးအချိန်ကတည်းကစတင်ခဲ့သောသမိုင်းကြောင်းအဆုံးဖြစ်သည်။ အော်တိုမန်အင်ပါယာ ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ဤကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဘာသာတရားသည်ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
ဘရူနိုလီမိုင်ရာ -“ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကားလမ်းကွန်ရက်များထဲမှတစ်ခု” - ပြင်သစ်မော်ဒယ်၏အားသာချက်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 31, 2021 မေလ 29, 2021 Lily Byrne	မှတ်ချက် Leave
အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့သောကြီးမားသောအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်တည်ဆောက်နိုင်ပြီးဘီလီယံနှင့်ချီသောကုန်ကျစရိတ်များလည်းရှိသည်။ သူတို့ပြီးစီးရန်ထိရောက်သောမော်ဒယ်များကိုတောင်းဆိုသည့်ဤအတိုင်းအတာသည်။ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည်အစိုးရစီမံကိန်းများတွင်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလမ်းညွှန်ရန်အတွက်စွယ်စုံသောယန္တရားဖြစ်ပြီးအခွန်ထမ်းများထံမှကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာစေသည်။
မေလ 28, 2021 မေလ 27, 2021 Mila Jones	မှတ်ချက် Leave
ဒူဘိုင်းသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းနှင့်ကြွယ်ဝမှုနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုများအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးသည်မြို့တွင်း၌သင်ရောက်ရှိရန်မတတ်နိုင်သောအရာဖြစ်ပြီးသင့်ကိုစွဲမှတ်စေနိုင်သည်။ သင်သည်ထိုထင်မြင်ချက်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရောက်နေပါကသင်မှားသည်။ အမှန်မှာ၊ သင်သည်ဒူဘိုင်းရှိဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အိမ်ခြံမြေများကိုရနိုင်သည်။ ဒါကငါတို့ဒီမှာတိကျစွာဆွေးနွေးလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။
အစ္စရေး - ဂါဇာ ၁၁ ရက်တာတိုက်ပွဲအပြီးတွင်မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့သည်
မေလ 23, 2021 မေလ 23, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
၁၁ ရက်ကြာတိုက်ပွဲအပြီးတွင်ဂါဇာနှင့်အစ္စရေးတို့အကြားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဂါဇာစစ်ပွဲအစတွင်ဂျေရုဆလင်သို့ဒုံးကျည်ငါးစင်းပစ်ချပြီးနောက်အစ္စရေးကမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအစ္စရေးလ်နှင့်အတူဂျိုးဘိုင်ဒင်နှင့်အတူအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုတောင်းဆိုရန်အစ္စရေးကာကွယ်ရေးကိုသူထောက်ခံခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 18, 2021 မေလ 17, 2021 Dmytro Spilka	မှတ်ချက် Leave
လန်ဒန်၏နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးသည်ယုံကြည်မှုထက်ကျော်လွန်နေသည်။ ကဏ္ sector အသစ်များပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်ဟောင်းနွမ်းသောအသွင်ပြောင်းမှုများပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့်ကဏ္ working သစ်သည်ပိုမိုခေတ်မီစွာအလုပ်လုပ်သောနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးနေသည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုရှာဖွေရာတွင်ကဏ္ The သည်မဆုတ်မနစ်ပြသခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ လန်ဒန်ရှိနည်းပညာကုမ္ပဏီများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်အတူတကွတိုးတက်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။
မေလ 17, 2021 မေလ 16, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေးစစ်ပွဲ - ပါလက်စတိုင်းသည်ခြောက်ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးသည်ဟားမတ်စ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများလည်းရှိခဲ့သော်လည်းအစ္စရေးသည်နိုင်ငံတကာဥပဒေနယ်နိမိတ်အတွင်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဟားမတ်စ်သည်အစ္စရေးလူ ဦး ရေထူထပ်သောဒေသများဖြစ်သော Tel-Aviv နှင့် Central Israel၊ Ashkelon, Beer Sheva, Kiryat Gat, Ashdod နှင့်ယေရုရှလင်များအပါအ ၀ င်ဒုံးကျည်တစ်ထောင်ကျော်ကိုပစ်ချလိုက်သည်။
မေလ 13, 2021 မေလ 13, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ Corona Pandemic အဆုံးတွင်ဂျူးများနှင့်အာရပ်တို့အားအရေအတွက်အားဖြင့်ကျင်းပရန်အခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။ In Lag Bomer ၏ Meron သည်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုကြောင့်ဂျူး ၄၅ ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်။ မနှစ်က Corona ကြောင့်ကန့်သတ်ချက်များရှိသော Al-Aksa တွင်ဆုတောင်းခြင်းများသည် Ramadan ကာလအတွင်းအာရပ်လူမျိုးများအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသောအခွင့်အရေးများကိုရရှိစေသည်။
မေလ 10, 2021 မေလ 9, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
Lag Bomer တွင်ယခုလအတွင်းမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Chassidim Toldot Aharon ၏ရဗ္ဗိများသည်ကလေးများအပါအ ၀ င်လူပေါင်း ၄၅ ဦး သေဆုံးပြီး Bar Yochai ၏ဝိညာဉ်၏မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုမီးစွဲလောင်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာသည်လူနေထူထပ်ပြီးအလင်းရောင်အပြီးတွင်ထိုဒေသမှထွက်ခွာလိုသူများမှာတင်းကျပ်စွာနှိမ့် ချ၍ လူတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နင်း မိ၍ နင်းမိကြသည်။ ဤအာဇာနည်လေးဆယ့်ငါး ဦး အပါအ ၀ င်ဒဏ်ရာများစွာရရှိခဲ့သည်။ သူတို့အားလုံးသည်recoveryဒင်ဥယျာဉ်တွင်မြန်ဆန်သောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ထာဝရငြိမ်သက်ခြင်းရှိသင့်သည်။
မေလ 9, 2021 မေလ 8, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်နှင့်ရုရှားအကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်များပြားလှသည့်လူမျိုးစုများအကြားဖြစ်ပွားနေသည့်စပိုင်ဂိမ်းမျိုးစုံရှိသည်။ ထို့အပြင်ရုရှားနှင့်ယူအက်စ်တို့သည်လက်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအငြင်းပွားဖွယ်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အဆိုပြုချက်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ,
ဘူလ်ဂေးရီးယားကကရင်မလင်ကိုဘူဂေးရီးယားရှိစစ်တပ်သိုလှောင်ရုံများ၌ပေါက်ကွဲမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ဆိုဖီယာရှိရုရှားသံရုံးမှဝန်ထမ်းတစ် ဦး ကိုလည်းဘူဂေးရီးယားမှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဘူဂေးရီးယားအရာရှိများသည်ပေါက်ကွဲမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ကူညီရန်ရုရှားအစိုးရအားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူတို့သည်ရုရှားများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်ထောင်ချောက်ဆင်ချင်ကြသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 4, 2021 မေလ 3, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ဂါလာလီမြို့ရှိရဗ္ဗိသင်္ချိုင်းဂူ၌ရှိသည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်ကြာသပတေးနေ့ညနေခင်းတွင်လူ ၄၀ သည်ခြေဖြင့်နင်းခဲ့ကြပြီးရာပေါင်းများစွာသောဒဏ်ရာရရှိသူများအားသူနာပြုများကတံဆိပ်တုံးဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဤအခမ်းအနားကို Live Video တွင်သာကြည့်ခဲ့သည်။ ယခုအစ္စရေးသည် Corona ကူးစက်မှုကိုအနည်းဆုံးလျှော့ချလိုက်သောကြောင့်ကျန်းမာရေးဌာနအနေဖြင့်ဤစုဆောင်းမှုကိုအကန့်အသတ်မရှိပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Abdullah Al Imran - မတားဆီးနိုင်သောဂီတအနုပညာရှင်
ဧပြီလ 29, 2021 ဧပြီလ 29, 2021 Abdullah Al Imran Imran	မှတ်ချက် Leave
အဗ္ဗဒူလာအယ်လ် Imran (၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသည်) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှအအောင်မြင်ဆုံးဂီတသမား၊ တေးဂီတအနုပညာရှင်၊ စာရေးဆရာနှင့်လူမှုမီဒီယာဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟက်ကာဇုံနှင့် Cyber ​​City Bangladesh - CCB တို့ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူသည်ဂူဂဲလ်တွင် "Verified Artist" ၏နောက်ပြန်ကိုပြီးအောင်လုပ်ခဲ့သည်။ Spotify, Deezer, Amazon ဂီတပန်းသီးဂီတနှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများစွာ။ သူသည်အမေဇုံတွင်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခံထားရသူလည်းဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 29, 2021 ဧပြီလ 28, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ဒီသောကြာနေ့ဟာအစ္စရေးနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေဟာ L” Ag B” ပွဲတော်ကိုကျင်းပကြလိမ့်မည်။ L” Ag B'Omer ၏အားလပ်ရက်သည်ဂျူးပွဲတော်များဖြစ်သောပသခါပွဲနှင့်ရှီဗွတ် (အပတ်) ကြားတွင်ဖြစ်သည်။ ပသခါပွဲနှင့် Shavuos အကြား 49 ရက်။ ဤကာလအတွင်းသန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလက်ထက်တွင်အိုမာဟုခေါ်သောဂျုံသစ်ကိုယဇ်ပူဇော်သည့်အချိန် ၄၉ ရက်ကိုရေတွက်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒူဘိုင်းသို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင် ၆ ခု
ဧပြီလ 27, 2021 ဧပြီလ 24, 2021 Dhowcruise ဒူဘိုင်း	မှတ်ချက် Leave
သင်တိုင်းပြည်တစ်ခုသို့လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်အခါတိုင်းအရေးကြီးဆုံးသောမေးခွန်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်“ သင်သည်နာရီပေါင်းများစွာခရီးသွားခြင်းနှင့်ငွေဖြုန်းခြင်းအတွက်ထိုက်တန်ပါသလော” ဟုသင့်ကိုယ်သင်မေးမိသည်။ အကယ်၍ သင်၏ ဦး တည်ချက်သည်ဒူဘိုင်းဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အမှန်ပင်ကြီးမားသောဟုတ်သည်! ဒူဘိုင်းသည်နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုံခြုံဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မတူကွဲပြားသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက်ထိပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Shovon Ahmed ကဘယ်သူလဲ။
ဧပြီလ 25, 2021 ဧပြီလ 25, 2021 Shovon ahmed	မှတ်ချက် Leave
Shovon Ahmed ဟုအမည်ရသည့်ပညာရှင် Md Mehedi hasan သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂီတအနုပညာရှင်နှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်၊ Gamer နှင့် Instagram Personality ဖြစ်သည်။ Shovon Ahmed ကိုAprilပြီလ ၈ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Chattogram ဌာနခွဲရှိ Noakhali တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Shovon Ahmed ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးများမှ Verified Artist အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ Shovon Ahmed ၏သီချင်းများကိုယခုပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ သီချင်းချစ်သူများသည်သူတို့လိုချင်ပါကသီချင်းများကိုနားထောင်နိုင်သည်။ လူကြိုက်များသောဂီတဒါရိုက်တာများ၊ အနုပညာရှင်များသည်သူ့ကို Twitter, Facebook နှင့် Instagram.med တို့တွင်အဆင့်အတန်းများဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 24, 2021 ဧပြီလ 21, 2021 မာရီနီ	မှတ်ချက် Leave
ပထမတကယ့်ဒီဂျစ်တယ်မျိုးဆက်အနေဖြင့် Millennials သည်ငွေထက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဒီနည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့အစားအစာတွေ၊ အဝတ်အစားတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းနဲ့ပေးချေလိမ့်မယ်။
ဤသဘောထားသည် e-commerce လုပ်ငန်းနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်အမျိုးမျိုးအတွက်ကြီးမားသောမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေပေးချေမှုကဒ်များဖြစ်သော Venmo နှင့် cryptocurrency တို့ကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှုစနစ်များသည်ငွေပေးချေမှုကိုတစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်နေသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 23, 2021 ဧပြီလ 22, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ်	မှတ်ချက် Leave
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အိန္ဒိယလမ်းမများတွင်ခွေးကောင်ရေ ၃၅ ​​သန်းကျော်နေထိုင်ကြသည်။ ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အိမ်ထောင်စုများကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောကြောင့်အရေအတွက်တိုးလာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဤအားနည်းချက်ရှိသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်သက်တောင့်သက်သာရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အာဟာရလိုအပ်သည်။
ဤခွေးများသည်တိရိစ္ဆာန်ပရဟိတလုပ်ငန်းများမှလိုအပ်သောအကူအညီနှင့်ကာကွယ်မှုကိုရနိုင်သော်လည်းလူများကိုလည်းအားပေးပါသည် ခွေးအမိုးအကာမှလှူဒါန်းပါ ဤအဖွဲ့အစည်းများဖောကူညီရန်။ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားပြုသည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်တိရစ္ဆာန်အမိုးအကာများနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်များသည်လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ရပ်ရွာမှပုံမှန်လှူဒါန်းမှုများလိုအပ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 23, 2021 ဧပြီလ 21, 2021 Lizzie Howard	မှတ်ချက် Leave
သငျသညျင် ပြည်ပမှာလေ့လာရန်စဉ်းစား, ဒါပေမယ့်သင်ရုံသေးစိတ်ကူးမှကျူးလွန်ကြပြီမဟုတ်။ ကောင်းပြီ, သင်နောက်ထပ်ပြည်ပသို့သွားရန်အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အောက်ပါတို့မှာအခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်လေ့လာသင်ယူခြင်းသည်သင်၏ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာသင်လေ့လာနိုင်တာတစ်ခုကလွတ်လပ်ရေးပဲ။ သင်၌မှီခိုရန်အခြားမည်သူမျှမရှိကြောင်းသိထားခြင်းကအရာအားလုံးကိုသင်၏ပခုံးပေါ်တင်လိုက်ပြီးထိုတာ ၀ န်သည်အသုံးဝင်နိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးရန်သင်ကြားပေးခြင်းသည်သင်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်အပေါ်ဆက်လက်မှီခိုနေရသောအခါသင်သည်လွတ်လပ်မှုခံစားမှုကိုခံစားရလိမ့်မည်။ ဒီသင်ခန်းစာတွေကသင့်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးကိုအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပြီး၊ သင်လေ့လာသိရှိခဲ့သမျှကိုသူတစ်ပါးအားမျှဝေနိုင်ပြီးသူတို့တိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဧပြီလ 22, 2021 ဧပြီလ 22, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ်	မှတ်ချက် Leave
ကျိုးနွံမှုသည်အစ္စလာမ်၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အစ္စလာမ်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။ ဘာသာရေးအရသတ်မှတ်ထားသည့်ကျိုးနွံစွာဝတ်စားဆင်ယင်ပုံသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများကိုအနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်အားလေးစားမှုဖြင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ၊
ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နေစဉ်အမျိုးသမီးများဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနှင့်ခြားနားမှုအနည်းငယ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သော်လည်း kaftans, hijabs နှင့် abayas များသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိမွတ်စလင်အမျိုးသမီးများကပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
ဧပြီလ 22, 2021 ဧပြီလ 22, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
နေတန်ယာဟုကို ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်သူနှင့်အတူအစိုးရဖွဲ့ရန် ၂၈ ရက်ပေးခဲ့သည်။ အချိန်ကကုန်နေပြီ။ အခက်အခဲများအတွက်အကြောင်းပြချက်မှာယခင်ကလီကွတ်နှင့်နေတန်ယာဟုအပေါ်သစ္စာရှိခဲ့သောကက်ဆက်အဖွဲ့ဝင်များသည်ညာဘက်အစိုးရမှနသန်နီယာနှင့် ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်မှနုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတွင်ခရီးသွားနိုင်ပုံ - သိကောင်းစရာ ၃ ချက်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 20, 2021 ဧပြီလ 17, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
တိုင်းပြည်ကိုလေ့လာချင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနုတ်ထွက်စရာမလိုတော့ဘူး။ အကယ်၍ သင်တန်ဖိုးကိုစိတ်ထဲချဉ်းကပ်ပါကဘဏ်ကိုမချိုးဖောက်ဘဲခရီးသွားနိုင်စရာများစွာရှိသည်။
သင်၏ခရီးသွားသောဒေါ်လာကိုအပြည့်အဝအသုံးချရန်သော့ချက်မှာသင်၏ရန်ပုံငွေများကိုအကျိုးသက်ရောက်သောအရာများအဖြစ်သုတေသနပြုရန်၊ စီစဉ်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင့်အားဘတ်ဂျက်ငွေသုံးစွဲရန်ကူညီရန်အချက်သုံးချက်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
၇ Hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုဆိုင်ရာစီးပွားရေးသည်လူမှုမီဒီယာတစ်ခုလိုအပ်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည့်အကြောင်းရင်းများ
ဧပြီလ 19, 2021 ဧပြီလ 19, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ်	မှတ်ချက် Leave
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ကျိန်ခြင်းနှင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်မကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကဲ့သို့မှားယွင်းနိုင်သည့်ဥပမာများစွာရှိသည်။ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တရားဝင်အကောင့်များ၌မသင့်လျော်သောအရာတစ်ခုခုကိုတင်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအမှတ်အသားလွဲချော်တဲ့ post ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော် these ည့်ဝတ်ကျေပွန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အရေးကြီးသောအကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ဤသေးငယ်သောအမှားများအားလုံးသည်အလွန်အမင်းများပြားနေပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် business ည့်ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် business ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုဆိုရှယ်မီဒီယာအေဂျင်စီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးချသင့်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 16, 2021 ဧပြီလ 16, 2021 Perter တေလာ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုသကြားစျေးကွက်သည် ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၉ ခန့်မှန်းသည့်ကာလအတွင်းအလယ်အလတ် CAGR ၏တိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသကြား၊ နို့နှင့်အခြားအသုံးချပစ္စည်းများအတွက်သကြားဝယ်လိုအားများလာခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သကြားစားသုံးမှုမြင့်တက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 14, 2021 ဧပြီလ 14, 2021 Ankuraakarshit Yadav	မှတ်ချက် Leave
Ankur aakarshit Yadav သည် ankuraakarshit ဟုခေါ်တွင်သောပညာသည်အိန္ဒိယယူကျု၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်သည်။ Ankuraakarshit (ankur aakarshit Yadav) သည်ဂီတအနုပညာရှင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် Ballia uttar pardesh တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်သူသည် Ballia တွင်မိသားစုလေးယောက်နှင့်အတူနေထိုင်သည်။
ဧပြီလ 14, 2021 ဧပြီလ 13, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ဧပြီလ 10, 2021 ဧပြီလ 10, 2021 သတင်းပေးသူ	မှတ်ချက် Leave
Atien Enam သည် ScienThush ဟုခေါ်သည့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၏လူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ScienThush (Atique Enam) သည် YouTuber ဖြစ်ပြီးဂီတအနုပညာရှင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ သူသည် Dinajpur ၌ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ယခုသူသည် Gazipur တွင်မိသားစု ၀ င်လေးယောက်နှင့်အတူနေထိုင်သည်။
ဧပြီလ 9, 2021 ဧပြီလ 9, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေးရွေးကောက်ပွဲများက ဦး ဆောင်သည့်မှန်ကန်သောဘက်မှမရှိဘဲအဆုံးသတ်ခဲ့သည် အချစ် ဒါမှမဟုတ်နေတန်ယာဟုကိုအများစုနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်း။ နှစ်ဖက်စလုံးကအစိုးရဖွဲ့ရန်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ သမ္မတ Rivlin ကနေတန်ယာဟုအားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးအများစုမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့ရန် ၂၈ ရက်ဖြစ်သည်။ ပါတီနှစ်ခုအကြားအငြင်းပွားမှုများကြားမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ် ဦး မှာ Yamina ပါတီမှ Naftali Bennet ဖြစ်ပြီးသူ့နောက်တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ခုနစ်ခုနှင့်အာရမ်ပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 7, 2021 ဧပြီလ 7, 2021 Rizvi Hasan	မှတ်ချက် Leave
Rizvi Hasan သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်လူသိများသောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂီတအနုပညာရှင်နှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူဖြစ်သည်။ Rizvi Hasan ကိုAprilပြီ ၅ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဒါကာဌာနရှိ Gazipur တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Rizvi Hasan သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးများမှ Verified Artist အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ Rizvi Hasan ၏သီချင်းများကိုပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ သီချင်းချစ်သူများသည်သူတို့လိုချင်ပါကသီချင်းများကိုနားထောင်နိုင်သည်။ လူကြိုက်များသောဂီတဒါရိုက်တာများ၊ အနုပညာရှင်များကသူ့ကို Twitter, Facebook နှင့် Instagram တို့တွင်အဆင့်အတန်းများဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
BAS Agent ကိုသုံးပါ
ဧပြီလ 6, 2021 ဧပြီလ 6, 2021 Karen Sanders	မှတ်ချက် Leave
BAS Agent“ လုပ်နေခြင်း (BAS) လုပ်ခြင်း” (Business Activity Statement) သည်လူအများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏တကယ့်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော်ပိုရိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များသည်ရှုပ်ထွေးပြီးပြင်ဆင်ရန်၊ အချိန်ကုန်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သင့်အားအရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှသင့်ကိုဝေးဝေးသို့ထွက်ခွာစေနိုင်သည် - သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ သင်ဟာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်မဟုတ်လျှင်သင်လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးသင်ပေးရမယ်။ ပိုဆိုးတာက၊ မင်းရဲ့အခွန်အကောက်တွေကိုလျှော့ချပြီးမပေးနိုင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ သြစတြေးလျအခွန်အာဏာပိုင်များသည်မှားယွင်းသောအမြတ်အစွန်းများကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မယူကြပါ၊ ထို့အပြင်သင်သည်ထူးချွန်သောအခွန်များအပြင်ဒဏ်ငွေကိုလည်းပေးဆောင်နိုင်သည်။
ဧပြီလ 5, 2021 ဧပြီလ 3, 2021 Waqar Ahmad Nasir	မှတ်ချက် Leave
ခေတ်သစ်အိမ်ခြံမြေတိုးတက်မှုများမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်ဤရှေးခေတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများကုန်သွယ်မှုကိုကုန်ဆုံးချိန်အထိကုန်ဆုံးစေရန်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ အိမ်ခြံမြေပါကစ္စတန်ဈေးကွက်သည်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလားတူပင်အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းသည်ဒေါ်လာတစ်သန်းထရီလီယံကျော်၏ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းတန်ဖိုးကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအများစုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောကုန်သွယ်မှုသည်အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်သူ၊ အိမ်ရာအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်ရုံးခန်းတစ်ခန်းငှားရမ်းသူအားလုံးကိုရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ပြီလ ၄ ရက်၊ အစ္စရေးသတင်း။ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအသစ်မရှိပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 5, 2021 ဧပြီလ 4, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်ပသခါပွဲနေ့များပိတ်ထားသော်လည်းခရစ်ယာန်များသည်အီစတာတနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျင်းပကြသည်။ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များနှင့်ဘာသာရေးနေရာများဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်successfulသရေလလူမျိုးသည်အောင်မြင်မှုရခဲ့သော်လည်းသန့်ရှင်းသောသီတင်းပတ်အတွင်းများသောအားဖြင့်အစ္စရေးသို့ရောက်ရှိနေသောနိုင်ငံခြားသားဘုရားဖူးများကိုဝေးဝေးရှောင်ရှားရန်ကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 3, 2021 ဧပြီလ 2, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ဒီတနင်္ဂနွေမှာဂျူးလူမျိုးတွေဟာပသခါပွဲကိုခံကြရမယ်။ ပသခါပွဲပြီးတဲ့အခါအီစတာတနင်္ဂနွေကစပြီး ဂျူးဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်တူညီသောအမြစ်များရှိသည်ကိုသံသယမရှိပါ။ ဂျူးဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှစ်ခုလုံးသည်မောရှေ၏ကျမ်းငါးစောင်ကိုဂုဏ်တင်ကြသည်။ မောရှေ၏ကျမ်းငါးပုဒ်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကခြောက်ရက်အတွင်းကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးသတ္တမနေ့ရက်ကိုအနားယူပြီးဥပုသ်နေ့လို့ခေါ်တယ်။ အာဒံသည်ပထမဆုံးလူသားဖြစ်သောဖန်ဆင်းရာခြောက်ရက်၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သတ္တမနေ့ဥပုသ်နေ့သည်ဘုရားသခင်၊ လူနှင့်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းများအကြားလုံးလုံးလျားလျားငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ပြသည်။ ထာဝရဥပုသ်နေ့သည်လူသားအားလုံးအတွက်ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
12... 108 ပို့စ်အဟောင်းများ